Su'aalaha la isweydiiyo - Quanzhou Stamgon Trading Co., Ltd.
Waxaan qiimeyneynaa Asturnaantaada
Waxaan qiimeyneynaa asturnaantaada. Annagu kuma iibinno, mana kirayno ama amaahno wixii macluumaad ah oo lagu garan karo (oo ay ku jiraan cinwaanka emaylka, lambarka taleefanka, iwm.) Ee la xiriira macaamiisheena qofna. Kuuma weydiisan doono taleefanka ama boostada. Wixii macluumaad ah ee aad na siiso waxaa loo adeegsan doonaa si mas'uuliyad leh, waxaa loo hayaa daryeelka iyo amniga ugu weyn, loomana adeegsan doono qaab aadan ogolaan.
Ku saabsan Alaabada
Ku saabsan xirxiridda
adoo adeegsanaya xirmo fudud, xirmo kasta oo kuxiran bac boorso ah, ama 10 xirmooyin oo bac weyn ah, ama gaar ah.
Fadlan tixraac qaybta "cabirka" qayb walboo alaab ah wixii faahfaahin dheeri ah. Ku saabsan shaxanka cabirka, fadlan booqo: shaxanka cabirka
Miyaad aqbashaa xaalada OEM oo maxay tahay tirada ugu yar ee xaalada OEM?
Haa, xaalada OEM waa la soo dhoweeyay tirada ugu yarna waxay kuxirantahay waxyaabaha aad dalbatid. Fadlan fadlan u soo dir sawirrada sawirka cad ee aad rabto inaad noo dalbatid, waxaan u gudbin doonnaa naqshadeeyayaashayada, markii aan helno qalabka, waxaan kuu soo saari karnaa waqtiga. Hadeysan jirin, waanu kuu raadineynaa adiga, kadibna alaab soo saar. oo u soo dir shaybaarka agabka kale ee aad adigu dalbato marka hore si aad u hubiso.
Waxyaabaha ku saabsan
Waxaan u isticmaalnaa dhar tayo sare leh oo si sahal ah loogu fidiyo dharka suufka dabbaasha, iyo 100% polyester ah gaagaaban xeebta, ama loo habeeyay.
Ku Saabsan Qiimaha iyo Bixinta
Ku saabsan qiimaha
Waad noo soo diri kartaa farriin ama weydiin, noo sheeg nooca aan ahayn alaabooyinka aad jeceshahay iyo tirada la codsaday, ka dib ayaan kuu soo diri doonnaa oraahda.
Nidaamka qiimo dhimista
Waxaan ku bixinnaa qiime dhimis noocyo kala duwan, fadlan la xiriir dalabkaaga tirada.
Bixintayada iyo macluumaadka lacagaha la soo diro ee bangiga.
Waxaan aqbalnaa kaararka amaahda, wareejinta Bangiga. Amarka yar ama amar muunad, si toos ah ayaan u aqbalnaa lacag bixinta tooska ah.
Haddii aad rabto inaad iiga bixiso Bangiga, fadlan nala soo xiriir.
Ku saabsan waqtiga lacag bixinta
Waxaan ka aqbalnaa bixinta degdegga ah ee khadka tooska ah ee kaararka amaahda. Lacagta guud waa in lagu bixiyaa 3 maalmood gudahood. Haddii ay jiraan wax sabab ah oo dib loogu dhigo bixinta, fadlan marka hore nala soo hadal. Mahadsanid.
Waa maxay tirada ugu yar ee amarrada?
A: qaabkeena saamiyada, MOQ wuxuu noqon doonaa 10 pcs halkii qaab / midab.
Iyo qaabeynta loo habeeyay, MOQ: 200 gabal halkii qaab / midab.
Miyaad tusaale nooga dhigi kartaa?
A: Haa, laakiin waa inaad bixiso saamiga iyo kharashka diridda. Waxaad noo soo diri kartaa shuruudaha faahfaahsan ee muunadda si aan u hubin karno qiimaha iyo waqtiga muunadda, ka dib markaan helno bixintaada, isla markiiba waxaan diyaarin doonnaa amarkaaga saamiga.
Ma ku dari kartaa summad noo gaar ah alaabada?
A: Haa. Waxaan bixinaa adeegga lagu daro sumadda macaamiisha, fadlan u soo dir naqshad naqshadeeye naqshada qaab PDF ama qaab AI ah.
Ku Saabsan Shixnadaha
Sidee loo rarraa?
Waxaan ku soo rari doonnaa xirmooyinka bayaannada caalamiga ah ee EMS / DHL / UPS / TNT, ama waxaan ku soo dejin doonnaa badda haddii xaddiga qaaddigu uu ka badan yahay 1cbm, taas oo kuxiran tirada.
Immisa maalmood ayey qaadataa?
Guud ahaan waxay qaadataa 3-4 maalmood oo shaqo maalmaha adduunka oo dhan iyadoo loo marayo UPS, iyo 5-7 maalmo shaqo oo ay bixiso EMS (marka laga reebo Ruushka), iyo 4-5 maalmood oo shaqo ah oo ay bixiso TNT / DHL iyada oo kuxiran meesha aad ku nooshahay.
Ku saabsan waqtiga dhalmada
Markaad isku diyaarinayso inaad amar samayso, waxaan hubin doonnaa amarkaaga marka hore ka dib waxaan kuugu soo diri doonaa qaansheegta 24 saacadood gudahood. Alaabada keydsan waxaan ku siin doonnaa 7 maalmood gudahood, haddii kale waxaan kuu xaqiijin doonnaa waqtiga gaarsiinta.
Ii sheeg qiimaha dhoofinta ka hor amar
Kharashaadka dhoofinta waxay kuxirantahay culeyska, cabirka iyo habka gudbinta (EMS, DHL, TNT, UPS, ama transit transit) iyo wadanka loo socdo. Marka way nagu adag tahay inaanu caddeynno khidmadda dhoofinta saxda ah kahor intaadan dalban ( culeyska saafiga ah ee hal xabbadood oo birkiisti ah waa 0.2kg, laakiin culeyska muggu wuxuu gaarayaa 0,5kg / pc). Oo waxaad dooran kartaa shirkadda dhoofinta ee aad jeceshahay waxaan kaloo hubin doonnaa dhammaan muujinta oo waxaan kuu soo jeedinaynaa habka kuugu habboon adiga.
Ku saabsan Soocelinta & Shuruudaha
Waxaan muhiimad gaar ah u leenahay tayada badeecada iyo adeegyadaba, sidaa darteed intaadan u soo dirin qeybta, waa inaanu hubinaa sheyga mar labaad oo aan isqurxineynaa.
Sida loola macaamilo, Haddii sheyga cilladaysan yahay?
Waan ka xunnahay in sheygu cillad leeyahay, oo si firfircoon ayaan ula tacaali doonnaa dhacdooyinka noocaas ah. Waxaan sidoo kale u baahanahay caawintaada.
Marka hore: Haddii sheygu cilladaysan yahay, fadlan na soo ogeysii 3 maalmood gudahood marka la soo qaado.
Midda labaad: fadlan toogashada sawirka sheyga waa cillad, ka dibna sawir noogu soo dir email ahaan, si aan ugu gudbiyo Agaasimahayaga Farsamada, ka dib markay hubiyaan oo ay oggolaadaan, waxaan kuwa cusub ku dari doonaa dalabkaaga xiga bilaash ah.
Soo celinta ama joojinta nidaamka
Si loo bixiyo adeegyo macaamiil oo ka sii habboon, waxaan aqbalnaa soo-celinta oo waxaan amraynaa joojinta muddo 24-ka saac ah.
Iskusoo wada duuboo, waad ku mahadsan tihiin meelaynta boggayaga www.stamgon.com . Ku qanacsanaantaadu waxay noqon doontaa isha ugu weyn ee dhiirrigelinkeenna ah.
Waxaan u dejineynay bogga si aan kuu siino inaad ku hesho habka raadraaca ee shirkadda u dhigma sida ugu dhakhsaha badan waxaan rajeyneynaa inay kaa caawin karto dhameystirka baaritaanka dalabka.
Waxay micnaheedu tahay in aan dalabkaaga dirnay markii aad hesho lambarka raadraaca. Waad ka hubin kartaa xaalada xirmadaada dusha bogga raadinta dalabka . Wixii su'aalo ah, fadlan nagala soo xiriir si xor ah!
PS: Mararka qaar waxay muujiyaan dib u dhac ku saabsan cusboonaysiinta macluumaadka boggooda internetka. Marka fadlan fadlan samir oo hubi inyar ka dib. Fahamkaaga si aad ah ayaa loo qadarin doonaa, mahadsanid!